इन्स्टाग्राममा कसरी अनुयायीहरूलाई हटाउने: यो के हो र यसले कसरी काम गर्दछ ग्याजेट समाचार
इन्स्टाग्राम आज लोकप्रिय लोकप्रियताको एक सामाजिक नेटवर्क हो। लाखौं व्यक्तिको यसमा खाता छ। विशेष गरी ब्रान्ड र प्रभावकर्ताहरूको मामलामा, यो एक राम्रो शोकेस भएको छ, उत्पादन वा आफैलाई प्रमोट गर्न। यस कारणका लागि धेरैले बाटो खोज्छन् सामाजिक नेटवर्कमा अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुहोस्, केहि मार्गनिर्देशनहरूको साथ सम्भव छ।
तर, यो यस्तो पनि हुन सक्छ कि तपाईको अनुयायी नहुने कोही इन्स्टाग्राममा तपाईंको फलोअर छ। यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? केहि समयको लागि, लोकप्रिय अनुप्रयोगसँग एक सुविधा रहेको छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुयायीहरूलाई हटाउन अनुमति दिन्छ। त्यसोभए तपाईं यस व्यक्तिलाई पछ्याउन सक्नुहुन्न।
1 यो के हो र इन्स्टाग्राममा फलोअरहरू हटाउनुहोस्
2 इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई मेटाउनुहोस्
3 हामी हटाउने अनुयायीहरूको बारेमा के हुन्छ?
4 के यो एक उल्टो प्रक्रिया हो?
यो के हो र इन्स्टाग्राममा फलोअरहरू हटाउनुहोस्
त्यहाँ धेरै पटकहरू छन् जब एक व्यक्तिले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा अनुसरण गर्न सक्दछ। तर, यो मामला त्यस्तो हुन सक्छ तपाई इच्छा गर्नुहुन्छ कि व्यक्ति तपाईलाई पछ्याउन सकिन। वा यदि तपाइँसँग एक निजी खाता छ, एक पटक तपाइँ पछ्याउनको लागि सहमत हुनुभयो, तर अब तपाइँ यसलाई पछुताउनु हुन्छ। त्यो अवस्थामा, अनुयायीहरूलाई हटाउने सुविधा गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।
नामले नै यो स्पष्ट पार्दछ कि यो के हो। यो एक समारोह हो जसले हामीलाई अनुमति दिन्छ हाम्रा केही अनुयायीहरूलाई हटाउनुहोस् इन्स्टाग्राममा। यस तरिकाले, यी व्यक्तिहरू हाम्रो खातामा अनुयायीहरूको रूपमा गणना गर्न रोकिनेछ। एक निजी खाता को मामला मा, त्यसो को लागी यी मानिसहरु तपाइँ आफ्नो खाता बाट सामाजिक नेटवर्क मा अपलोड सबै चीज देखि हेर्न रोक्नुहोस्। त्यसैले त्यस्ता अवस्थाहरूमा यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
कसरी मेरो इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने
इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई चाहेको सबै अनुयायीहरू हटाउन अनुमति दिन्छ, हाम्रो सूचीमा छन् कि ती। यस सन्दर्भमा कुनै सीमा छैन। त्यसोभए यदि त्यहाँ एक वा बढि व्यक्ति छन् जुन तपाईं पछ्याउन रोक्न चाहानुहुन्छ, तपाईं सजीलै गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, सामाजिक नेटवर्कमा अनुयायीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया पूरा गर्न वास्तवमै सरल छ। यस अर्थमा यो स्मार्टफोनको संस्करणबाट गर्नुपर्दछ, जहाँ यो सम्भावना उपलब्ध छ।
इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई मेटाउनुहोस्
त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको हाम्रो स्मार्टफोनमा खुला इन्स्टाग्राम हो। जब हामीसँग सामाजिक नेटवर्क खुला छ, हामी सामाजिक नेटवर्क मा हाम्रो प्रोफाइल मा जानु पर्छ। त्यहाँ, हामी पर्छ हामीसँग हाम्रो प्रोफाइलमा रहेका अनुयायीहरूको संख्यामा क्लिक गर्नुहोस्। यस तरिकाले, फोन स्क्रिन व्यक्ति वा खाताहरू अनुसरण गर्दछ जुन हामीलाई फलो गर्दछ।
त्यसो भए, हामीले त्यो व्यक्ति वा व्यक्तिहरू खोज्नु पर्छ जुन हामी पछ्याउँदैनौं, त्यो सूचीमा भनिएको छ। यदि तपाईंसँग धेरै अनुयायीहरू छन् भने, तपाईं सीधा सामाजिक नेटवर्कमा यस सेक्सनमा खोजी इन्जिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जब हामीले व्यक्तिको नाम फेला पार्दछौं, हामी त्यो देख्छौं उहाँको नाम पछाडि तीन ठाडो थोप्लाहरू छन्। हामीले त्यसपछि यी तीन बिन्दुहरूमा क्लिक गर्नुपर्दछ। हामी स्क्रिनमा एक सानो प्रासंगिक मेनू पाउनेछौं, यस अवस्थामा एक अद्वितीय विकल्पको साथ।
यो विकल्प यस इन्स्टाग्राम अनुयायीलाई मेटाउने हो। हामीले चाहेको कुरा यही हो, त्यसैले हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यो गरिरहँदा, हामी एक पुष्टिको लागि सोधिनेछ, यो स्पष्ट पार्न कि हामी के गरिरहेका छौं त्यसमा हामी निश्चित छौं। यो केवल मेट्नको लागि क्लिक गर्न बाँकी छ, ताकि यो व्यक्ति अब हाम्रो अनुयायी हुनेछैन। यदि तपाईं अधिक व्यक्तिसँग गर्न चाहानुहुन्छ भने, प्रक्रिया पूरा गर्न सबै अवस्थामा समान हुन्छ। दुर्भाग्यवस, यो त्यस्तो चीज हो जुन एक पटकमा गरिन्छ। त्यसोभए यदि तपाईंसँग मेटाउन धेरै अनुयायीहरू छन् भने, प्रक्रिया काफी लामो समय लिन सक्दछ। तर अनुसरण गर्नका चरणहरू उस्तै छन्, त्यसैले तिनीहरू धेरै सरल छन्।
हामी हटाउने अनुयायीहरूको बारेमा के हुन्छ?
घटनामा कि हामीसँग इन्स्टाग्राममा एक सार्वजनिक प्रोफाइल छ, वास्तविकता यो हो कि यो त्यस्तो कार्य हो जुन धेरै अर्थ राख्दैन। यो व्यक्ति सामाजिक नेटवर्क मा तपाइँका प्रकाशनहरू हेर्न जारी छ। तपाईं टिप्पणी, मनपर्ने र प्रोफाइल वा कथाहरू हेर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। साथै, यदि त्यो व्यक्तिले इच्छा गर्दछ भने, तिनीहरूले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा फेरि पछ्याउन सक्छन्। यस अर्थमा, एक सार्वजनिक प्रोफाइल मा, यदि त्यहाँ कोही छन् जो तपाईंलाई रिसाउने छ भने, यसलाई रोक्नु उत्तम हुन्छ। भनिएको व्यक्तिलाई अवरुद्ध गर्नुको मतलब हो कि उनीहरूले तपाईंको कुनै पनि प्रकाशनहरू देख्न सक्दैनन्, वा तपाईंसँग सम्पर्क राख्छन्।
इन्स्टाग्राममा निजी प्रोफाइल भएका ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि, त्यसो भए यो ठूलो चासोको कुरा हो। यदि त्यहाँ एक व्यक्ति छ जुन तपाईं पछ्याउन चाहनुहुन्न, तपाईं यसलाई यस तरिकाले पाउनुहुन्छ। तपाईंको अनुयायीहरूबाट यसलाई हटाएर, यस व्यक्तिले तपाईंको कुनै पनि प्रकाशनहरू देख्न सक्नेछैन, नता तपाईंको सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको प्रोफाइलको कथाहरू। यो वास्तवमा चाहिएको कुरा हो, त्यसैले यस अर्थमा यो राम्रोसँग काम गर्दछ।
यद्यपि यो व्यक्तिले हामीलाई एक निजी सन्देश पठाउन सक्दछ, यदि हामीले यो विकल्प सक्रिय गर्यौं भने। साथै तपाईं सामाजिक नेटवर्कमा हामीलाई फेरि अनुसरण गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए यसको पूर्ण अर्थ यो होइन कि हामी यो व्यक्तिबाट छुटकारा पाउँछौं। यद्यपि हामी निर्णय गर्छौं कि कसले हामीलाई पछ्याउँछ र कसले इन्स्टाग्राममा गर्दैन। तर, यदि यसले वास्तवमा हामीलाई दु: ख दिन्छ भने, हामीले ब्लक गर्न विकल्पमा सहारा लिनु पर्छ। यदि तपाईं उसलाई आफ्नो पोष्टहरू हेर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं जहिले त्यसलाई आफ्ना अनुयायीहरूबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
के यो एक उल्टो प्रक्रिया हो?
यदि तपाईंले आफ्नो इन्स्टाग्राम खातामा एक अनुयायीलाई मेटाउनुभएको छ भने, त्यो व्यक्ति अनुयायीको रूपमा मेटाइएको छ, प्रक्रिया उल्टाउने कुनै सम्भावना छैन। यो त्यस्तो चीज हो जुन धेरै संभावनाहरू प्रदान गर्दैन। यद्यपि यो त्यो व्यक्ति हो जसलाई त्यस अवस्थामा कारबाही गर्नुपर्दछ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई तपाईंको खातामा फेरी पछ्याउन।
तसर्थ, यदि तपाईं गल्तीले एउटा फलोअर मेटाउनुहुन्छ भने, व्यक्तिले तपाइँको खाता फेरि पछ्याउनु पर्छ भन्यो। ताकि प्रक्रिया केहि "उल्टो" छ। तर यो केहि चीज हो जुन प्रश्नमा प्रयोगकर्ताले गर्नु पर्छ। एक निजी खाता को मामला मा, त्यो व्यक्ति इन्स्टाग्राम मा तपाइँको प्रोफाइल पछ्याउन सक्षम हुन फेरि अनुरोध पठाउनु पर्छ। एउटा अनुरोध जुन तपाईंले स्वीकार्नुपर्नेछ, ताकि म तपाईंको प्रकाशनहरू फेरि देख्न सक्दछु।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » इन्स्टाग्राममा कसरी अनुयायीहरूलाई हटाउने